okushisa ephakeme - lena impendulo evamile yomzimba ukubukeka igciwane. Amazinga isilinganiso umzimba zokhahlamba kusuka 35 kuya 37 degrees Celsius, kodwa ngokuvamile kakhulu kuba 36,6 degrees. Amazinga isigqugquzeli ngokwesayensi ngokuthi komzimba okukhulu. A kancane, ukwanda yesikhashana kungase kube ngenxa umzimba. Nokho, njengoba ukwehlisa ngezansi degrees 35, kanye nokukhula okukhulu kungase kubonise ukuthi umzimba akukhona konke kulungile.
okushisa ephakeme kuphakama izifo njengoba ezithathelwanayo kanye ukushaqeka ezishisayo. Heat unhlangothi kwenzeka uma umuntu osenesikhathi eside uvezwe okushisa aphakeme. Ngokuvamile heatstroke fumana amasosha behamba usuku ehlobo kushisa, amatilosi ezimweni ezishisayo, abasebenzi ezitolo ashisayo, abantu amaningi bethamele ilanga ogwini isikhathi eside futhi abahlanganyeli izintaba ihlelwe kahle. lokushisa Ukwandiswa ukushaqeka ezishisayo kwenzeka kaningi kubantu nge isifo senhliziyo noma dystonia semithambo. Wahlushwa wukushisa kufanele wathuthela umthunzi, khulula kusuka izingubo, ugibe, ukubeka into ebandayo endaweni imikhumbi emikhulu igazi, inhliziyo kanye ekhanda. izimali senhliziyo kumele isetshenziswe kuphela uma kudingeka. Isisulu kumelwe siphuza neziphuzo kakhudlwana. Uma usizo awuzange enikeziwe, ukushisa unhlangothi, kwezinye izimo kungabangela ikhoma ngokomzimba noma kuholele ekufeni.
Uma komzimba kugcinwa njalo, kuba - kuwuphawu lokuthi umzimba akuyona yonke emihle. Ngokwesibonelo, esitebeleni lokushisa eliphezulu zomzimba - lokhu ingenye izimpawu kungenzeka ukutheleleka, ene-leukemia. Uma eshisa ngaphezu umuntu evamile futhi kuhambisana ukopha, lokhu kungase futhi ibonisa ukuthi izimila emzimbeni.
Endabeni okwandisa izinga lokushisa ngenhla uphawu 39 degrees kufanele kwenziwe kudokotela. Lapho komzimba okukhulu, Ngokuqhubeka isikhathi eside, ephelezelwa Oqala ukungezwa aze agcine isimo lesiguli, futhi kudingeka ukuba aye kudokotela.
Ngokuvamile ukukhombisa aphakeme lokushisa ngesikhathi sokukhulelwa. Nokho, lokhu akwenzeki ngazo zonke eyabonisa ukuqala lesi sifo. imfiva eziningana ngesikhathi sokukhulelwa ikakhulukazi ngokuvamile ezinyangeni ezintathu zokuqala ngemva kokubamba. Ngokuvamile kubangelwa izinguquko emzimbeni owesifazane okhulelwe bese lowo, ikakhulukazi, ukukhiqizwa progesterone. Nokho, uma imfiva ngesikhathi sokukhulelwa ihlobene namanye izigameko ezingezinhle ezavela, kuyilapho abesifazane kufanele kudokotela. Low-grade imfiva kungenzeka phetho i ukuvuvukala emzimbeni futhi iyiphi ukutheleleka owesifazane okhulelwe kuyingozi kakhulu ngoba i-fetus. Amazinga isigqugquzeli ngesikhathi sokukhulelwa kwezinye izimo kuholela abruption esinomhlapho. Ngakho-ke, kufanele ukushisa iqedwe. Nokho, lokhu akufanele kwenziwe uma izinga lokushisa ingaphezu 37.5 degrees, kubalulekile ukuba adubule phansi, uma lidlula degrees 38.
Nasi ngumkhuhlane e ingane (37 ukuze 37.4) ezinsukwini ezimbalwa zokuqala ngemva kokuzalwa - lena evamile, engokwemvelo. Ngaphezu kwalokho, phakathi nonyaka, izinga lokushisa uhlaliseke ngaphakathi 36-37 degrees, kodwa ngalesi sikhathi kuhlelwe izinga - 36,6. Amazinga ophakeme ingane - ngaso sonke isikhathi kuwuphawu isenzo kwamagciwane. ingane umzimba kuyinto ebucayi kakhulu, umnene, ukwazi ukubhekana nanoma yisiphi ushintsho. Ngezinye izikhathi ngisho kwenzeka ukuthi abanye imfiva e ingane eminyakeni 1-2 - yokusabela kuya ushintsho Ukudla, nezinye izizathu ezifanayo. Ukuze izinyane udinga ukuthenga thermometer ahlukene ngaphambi kokusebenzisa ngakunye bayiqede ngotshwala. Uma ingane has imfiva ifinyelela degrees 39, it is hhayi Kunconywa ukuba adubule phansi. Uma isiguli abasha nokunwetshiwe komzimba okukhulu, xhumana nodokotela wezingane zakho.
Ukopha ebuchosheni. Indlela ukuyivimbela.
Indlela esiphatha ngayo ukuwela flat
Ingabe inkosi British ukushada ngenxa yothando?